Shirkii madaxda uga bilaaban lahaa Afisyoone oo maanta dib u dhacay & M/weyne sabab u ah.
April 6, 2021 Xuseen 5
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Sida lagu daabacay wakaaladda wararka u fidisa dowladda Soomaaliya ee SONA waxaa maanta dib u dhac kuyimid shirkii madaxda dowladda federalka ah iyo dowlad goboleedyada dalka maanta markale uga bilaaban lahaa teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho.
Arrinta keentay dibu-dhaca shirka ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay mid la xiriirta safarka Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu shalay ku tegay Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulkaasi.
Hoggaamiyayaasha Soomaalida ayaa ayaa la filayaa in shirka ay isugu soo laaban doono maalinta barri ah 7- da Bisha, isla markaana ay sii wadi doonaan shirka oo looga hadlayo ajendayaasha Shirka Madaxda dowladda iyo kuwa maamulada ee ka furmaya Afisyooni maalmaha soo socda.
@@@ Diyaaradda Garowe &dekadda Garacad
Waxba yaan Faarax Geylan loo afgoosan. Diyaaraddan iyo waftiga la socda Soomaali oo dhan baa sheegtay oo meel kasta ayaa lagu qoray. Haddii wasiirka duulista ee Puntland qirtay in dawladdu xayirtay diyaarad Garacad ku jeedday oo ganacsato la socotay, waa maxay wax markhaati ah oo kale oo loo baahan yahay? Wax qiime ah sameynayso in saraakiisha Imaaraatka lagu tilmaamo ganacsato maalgashanaysa Garacad!
Imaaraadku markii la bilaabay dhismaha dekedda Garacad ayey bilaabeen guux iyo inay ka ashtakoodaan laakiin waxaa caqabad ku noqday in heshiiskii ay kula wareegeen dekadda Boosaaso uu dhigayey in aan masaafo 150km ah laga dhisi karin dekad kale. Garacad immisa ayey u jirtaa Boosaaso? 800km?
Imaaraatka oo doonaya inay curyaamiyaan dekadaha dalalka geeska Afrika, hadda markii ay xaqiiqsadeen in dekaddii hirgashay ayey usoo qalabqaateen sidii ay u curyaamin lahaayeen dekadda Garacad iyagoo adeegsanayaa shakhsiyaad aan damiir iyo qiyam lahayn oo ku shaqeeya sandareerto iyo laaluush.
Reer Mudug waxaan leeyahay: geeljire geela waa wada jirtaa waana kala jirtaa. Danaha masiiriga ah ee gobolkiinna cidna ha ka sugina oo ha uga dambeynina. Dekadda Garacad waa dekad istaraatiiji ah oo u adeegi doonta Mudug, Nugaal, Sool & Cayn, Galmudug, Hiiraan, iyo DDS. Imaraadka ka sokoow, waxay leedahay cadow badan oo xitaa reer Puntland ku jiraan. Marka, marnaba ha yeelina lacag ka timid Carab amase Soomaali iyaga u shaqeeya. Ha yeelina in diyaarad Carab wadda kasoo degto Garacad amase xitaa Gaalkacyo. Haddii ay isku dayaan inay dhulka soo maraan, ha u oggolaanina inay gobolka Mudug cag soo dhigaan.
Dhallinyarada reer Mudug iyo inta u daacadda ah aayaha dadkooda iyo gobolkooda ha ogaadaan in Imaraatku qaddiyad kasta ku gadan karaan laaluush. Waxay laaluushayaan madaxda Puntland, isimada, iyo xitaa dadka dekadda maamulaya. Haddii aad dareentaan in wax la isdabamarinayo, hubka qaata si aad u difaacdaan mustaqbalkiinna iyo kan degaankiinna.
Ugu dambeyn, markii aad aragto qof mas’uul ah oo qoyskiisa amase qaraabadiisu ku lug leeyihiin wax-is-dabamarin, shaki la’aan mas’uulkaas far musuq baa ku godan. Madaxweyne Deni walaalkiis hadallo ayaa laga sheegsheegaya, haddii dhaboobaan — isagana lugaha ayey la gali doontaa, muscaddiisana wasakhayn doontaa.
Jama cabdalla says:
Topic laga hadlayo ma aha d dekada garacad kk. Teedkale waqooyiga mudug waxaa laga yabaa iney hoos yimaadan maanulka galmudug halkaan waxaa ka muuqata inuu maamulka puntland talo faro ku heyn waana siyaasada foosha xun ee maxamuud salabeen xaare xukun jecel isticmaalan .
Ms xabuun ah ayaku haya alle haka daweeyo markiba qabiil ayadlaso boodey hhwaxad dhahdey Galmudug ahala hoosgeyn waqiyaga mudug shekadas inbada ayalagu fashilmay xassan shekh iyo guleed aya ugu danbeyey tika dhacday wala ogaa hadana wa meshidi o cid awood uleh majidho adna wad ogtahay dhulka anaga leh allena nagu beerey intaan jogno waalama taabtan lakin marki qof nalaka wayo hala qaato wbt.
Meeshan topigii la doono ayaa looga hadlaa; in cinwaanka in la tacliiqiyo khasab ma aha.
Arrinta in waqooyiga Mudug la hoosgeeyo Galmudug, ma doonayo inaan iraahdo hadal laga yaabo in uu dad walaalaheen ah damqo laakiin bal waxaad booqataa qofka reer miyiga ah ee ku nool waqooyiga Mudug oo weyddii ra’yigooda in lagu daro oo looga taliyo Dhuusamareeb. That’s putting the cart before the horse.
Shirka baaqdey maalintii labaad waxa ay sababta runta ahi tahay uun wakhti iibsi. Waar Qoorqooroow noo yara haki shirka si aanu u helno wakhti aanu kaarto kale usoo degno. Farmaajo iyo xertiisa aadbey ugu xuntahay xaajadu. Laakiinse cida aanan waxba barani waa Beesha Caalamka. Farmaajo sidaas uu imika yahay ee sumcad darada ah ayuuba Ku heystaa oo ay ugu badisaa. Isaga wixiisu waa Ku jiqsii illaa iyo intey kuugu gaadheyso. Kolba god gal oo hanadana uga bax, si marka lagaaga daalo ay Deni iyo Axmed Madoobe kaaga tagaan. Dabadeedna Muqdishona xuurtadaas kusii heysto. Axmed Madoobana Gedo ka qaad. Waxa soo hadheyba Puntland bey noqon. Iyana talaabadaad u degtey ka qaad kolkey inta kale kuusoo xero gasho. Salad walba wakhtigeeda ayaa la tukadaa. Imika Jubaland ayay diiradu saaraan tahay.
Waataas kaartada uu rabo inuu Farmaajo meel mariyo ee kolka lagu yara giijiyoba uu god kale ugu talaabayo. Su’aashuse waa ma u hirgeli doontaa?